Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 268041 times)
« Reply #50 on: December 19, 2009, 01:51:17 PM »
This Tundikhel bro is the most freaking diwana of Rekha Thapa that I have ever seen! Baaf re k ho: i think u update an article about her every other day! Chawi Ojha ko satta tundikhel lai nai chane hunthiyo Rekhale!
« Reply #51 on: December 19, 2009, 02:49:27 PM »
Quote from: thulomulo on December 19, 2009, 01:51:17 PM
Ma jasta FAN ta kati holan kati Rekha ka......
« Reply #52 on: December 22, 2009, 02:11:48 AM »
« Reply #53 on: December 25, 2009, 07:36:31 PM »
« Reply #54 on: December 27, 2009, 01:00:05 AM »
रेखाले गाइन् बुद्ध भजन
काठमाडौं, ११ पुस
हे बुद्ध, गुरु हे सुगत प्रभु
प्रभुलाई किन मैले चिन्न सकिनँ
अन्तरमनले देख्न सकिनँ
उल्लिखित बुद्ध भजन न्ाायिका रेखा थापाको स्वरमा रेकर्ड भएको छ । अभिनयसँगै बेलाबेलामा गीत पनि रेकर्ड गराउँदै आएकी रेखाले ज्योति शाक्यको शब्द र किरण शाक्यको संगीतमा हालै सो भजन गाएकी हुन् । आफूलाई सो भजनका शब्द र संगीत औधी मन परेकाले गाएको
उनले बताइन् ।
हिरोइनझँै चर्चित हुने चाहनाले गायनमा नलागेको बताउने उनले गीत गाउने क्रम आफैँले निर्माण गरेको फिल्म अजम्बरी नाताबाट सुरु गरेकी हुन् । सो फिल्ममा उनले आकाश र चाँदनीको यो माया कस्तो बोलको गीतमा बच्चाको स्वर दिएकी छिन् । आफ्नै फिल्मबाट गाउने 'प्राक्टिस' गरेको बताउँदै उनले भनिन्, 'त्यसपछि राम्रै भएकाले कहिलेकाहीँ गाउने गरेकी हुँ । तर, गायिकै बन्न, एल्बम निकाल्ने विचारले भने गाउने गरेकी छैनँ ।'
त्यसपछि पनि उनले देवरबाबु फिल्मको एउटा र्‍याप गीत गाइन् । 'हिफाजतमा पनि गाएकी छु,' सम्झँदै उनले भनिन्, 'राजेशपायल राईसँग हत्कडीको एउटा आइटम सङ पनि गाएकी छु ।'
आफूले गाउन सक्ने खालको गीत मात्र प्रयास गर्ने बताउने नायिका रेखा अब राष्ट्रिय गीत गाउन चाहन्छिन् । भन्छिन्, 'म त्यस्तो राष्ट्रिय गीत गाउन चाहन्छु, जुन गीतले सबै नेपालीमा देशप्रतिको जिम्मेवारी, माया र स्नेह अझ बढाओस् ।' आफूले गाएको बुद्ध भजनले मानव जातिमा सद्भाव कायम राख्दै भगवान्प्रति अझ श्रद्धा बढाउने ठहर उनको छ ।
« Reply #55 on: December 28, 2009, 02:29:10 PM »
« Reply #56 on: January 04, 2010, 04:36:06 AM »
रेखाको अर्को नाटक
अनेक नाटक गरेर संधै चर्चामा रहन खोज्ने नायिका रेखा थापाले फेरी बुद्ध भजन गाएर चर्चामा आएकी छन् । त्यसो त रेखाले आफैँले निर्माण गरेको फिल्म अजम्बरी नाताबाट गायन यात्रालाई पनि साथ दिएकी थिइन् ज्योति शाक्यको शब्द र किरण शाक्यको संगीतमा उनले भर्खरै मात्र बुद्ध भजन गीत गाएकी छन् । भजनका शब्द र संगीत एकदमै मन परेकोले उक्त गीत गाएको रेखाले बताईन् ।
गुरु हे सुगत प्रभु,
प्रभुलाई किन मैले चिन्न सकिनँ,
बुद्ध शरणं गर्छामि,
धम्म शरणम गर्छामि,
देवरबाबु, हत्कडी हिफाजतमा समेत गीत गाएकी रेखाले अब राष्ट्रिय गीत गाउन मन रहेको बताईन ।
« Reply #57 on: January 13, 2010, 05:44:49 AM »
काठमाडौं, पुस २८ (नागरिक) - हिरोइन रेखा थापा निकै बाठी छिन्। ठाउँ मिल्ने बित्तिकै आफ्नो बठ्याइँ प्रयोग गर्ने उनको बानी छ।
गत शनिबार एक फिल्मको कार्यक्रममा पोखरा पुगेकी यी हिरोइनको चतुर्‍याइँले धेरैलाई चकित तुल्यायो।
कार्यक्रम थियो फिल्म 'बाटुली'को प्रिमियर शो। त्यसको प्रवर्द्धन गर्न शीर्ष भूमिकाकी हिरोइन रेखा सहित फिल्मका मुख्य कलाकार पोखराको विन्दवासिनी हल पुगेका थिए। फिल्म हेरेर निस्किएका दर्शकलाई कलाकारहरूले गीतको क्यासेट बाँड्ने चलन छ। रेखाले निर्माता डाक्टरसिंह गुरुङसँग यो प्रस्ताव गरिन्। तर, पोखरामा 'बाटुली'को क्यासेट पाइएन। रेखाले तुरुन्तै जुक्ति लगाइन्। र, 'बाटुली' हेरेर निस्किएका दर्शकलाई आफैंले बनाएको फिल्म 'हिफाजत'को क्यासेट दिइन्।
त्यतिमात्र होइन फिल्म हलमा समेत 'हिफाजत'कै गीत गुन्जियो। 'कति जानेकी रेखाले,' 'बाटुली'को प्रतिक्रिया सुन्दै 'हिफाजत'को प्रचार समेत गर्न भ्याएकी रेखाको यो तरिका देखेर हलमा जम्मा भएका फिल्मकर्मीले भने।
« Reply #58 on: January 16, 2010, 08:15:50 PM »
« Reply #59 on: January 19, 2010, 03:32:41 AM »
रेखाले गाइन्- बुद्धम् शरणम गच्छामी
सोमबार, 18 जनवरी 2010 14:05 नागरिक
उमेश श्रेष्ठ, विराटनगर, माघ ४- कालो मिनी स्कर्ट र कालो कोटमा सजिएकी ग्ल्यामरस हिरोइन रेखा थापा मञ्चमा उत्रिइन्। एक सातादेखि घामको मुख नदेखेका विराटनगरबासी मञ्च तातिने अनुमानमा थिए। माइक समातेर उनी गाउन थालिन्। तर त्यो काठमाडौंमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नचाउने गरी गाइएको 'झिल्के' गीत थिएन। अनुहार र पोशाकमा झल्किएको ग्ल्यामरभन्दा ठिक विपरीत रेखाले भजन गाइन्-
सर्वस्व त्यागी जानु छ एकदिन
प्रभुलाई मैले किन चिन्न सकिनँ
भौतिकवादबाट आध्यात्मिकतातर्फ लम्केकी हुन् त उनी?
कोइराला परिवारले स्थापना गरेको विराटनगरको आदर्श माविमा आयोजित कार्यक्रममा 'शहीद' परिवारका बालबालिकासित फोटो खिचाउँदै उनले नागरिकन्युजसँग भनिन्,'कल्याणकारी काम तुरुन्तै गर्नुछ। जतिसक्दो छिटो गर्नुछ। जीवनको के भर छ र!' द्वन्द्वकालमा बाबुआमा गुमाएर टुहुरा बनेका तिनै बालबालिकाहरुको अध्ययनका लागि सुनसरीमा खोलिएको शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयको सहयोगार्थ आइतबार यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यसैमा सहभागी हुन रेखा पूर्वनिर्धारित सुटिङका सेड्युलहरुलाई स्थगित गर्दै निःशुल्क च्यारिटी कार्यक्रमका लागि विराटनगर आइपुगेकी थिइन्, मात्र चार घण्टाका लागि।
धम्मम् शरणम गच्छामी
उनको भजनका बोलहरुले शान्ति खोजिरहेका थिए। भनेपछि अब नायिका रेखा गायिका पनि भएकी हो? हतारमा विराटनगर आएर हतार मै फर्कनुअघि विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्,'हो, यो भजन मैले केही दिनअघि मात्र रेकर्ड गराएकी हुँ। सार्वजनिक रुपमा भजन गाउने संयोग भने पहिलो पटक गृहनगरमै जुर्‍यो।'
रेखाका स्टेज शोहरुलाई पहिले पनि हेरिसकेकी एक दर्शक भन्दै थिइन्,'यो निकै फरक र सोचेभन्दा विपरीत रह्यो। जस्तोखालको हाउभाउ र प्रस्तुति उनका स्टेज शोहरुमा हुने गर्थ्यो, त्यो यस पटक देखिएन। शायद कार्यक्रमको उदेश्य नै त्यस्तै भएकोले पनि होला।'
'अनाथ बालबालिकाहरुको लागि केही गर्न पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ। उहाँहरुलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,' उनले भनिन्। विद्यालयका लागि चन्दा उठाउन गरिने कार्यक्रमहरुको श्रृंखलामा आइतबारको कार्यक्रम पहिलो थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन मनोज गजुरेल, जेबी टुहुरे, शम्भु राई जस्ता कलाकारहरु पनि आएका थिए। अनाथ बालबालिकाहरुको प्रस्तुतिलाई भावुक रुपमा दर्शकहरुले हेरेका देखिन्थे।